Tantaran'ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô - Wikipedia
Ny tantaran' ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô dia voamariky ny fisian' ny fisian'ny fanjakana maro madinidinika tany aloha, ny fahatongavan' ny Eorôpeana, ny fivarotana andevo, ny fanjanahan-tany (belza ny an'ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô), ny fahaleovan-tena, ny ady an-trano, ny fanonganam-panjakana, ny fitsabahan'ny firenena mpifanolo-bodirindrina, ary ny fizorana mankany amin' ny demôkrasia.
1 Tahohan’ny fanjanahan-tany
3 Ny fitondran’ i Kasavubu
3.3 Ny nahafatesan’ i Patrice Lumumba
3.5 Fitohizan’ ny fiokoan’ ireo mpomba an’ i Lumumba
4.1 Ny fitondran’ i Mobutu Sese Seko
4.1.1 Fanonganana an’ i Kasavubu sy fitondrana jadon’ i Mobutu
5 Ny fitondran’ i Laurent-Désiré Kabila
5.2 Tompon’ antoka tamin’ ny fandripahana ny Hoto
5.3 Fikomian’ ny Totsy baniamolenge
6 Ny fitondran’ i Joseph Kabila
6.1 Fiakaran’ i Joseph Kabila teo amin’ ny fitondrana
7 Ny fitondran’ i Félix Tshisekedi
7.1 Fiakaran’ i Félix Tshisekedi teo amin’ ny fitondran
Efa nisy olona ity faritra mitondra ny anarana hoe Repoblika Demôkratikan'i Kôngô ity tamin'ny 200 000 taona tal. J.K. Ny mpikaroka dia nahita fitaovana madinika vita amin’ ny vato tao amin’ ny farihy Albert sy tao amin’ ny farihy Edward Edouard, izay nampiasain’ ny olona tany amin’ ny roa tapitrisa taona tany aloha. Ny lemaka midadasika kôngôley tamin’ izany fotoana izany dia rakotry ny ala tsy nisy nanimba. Nisy koa ny sisan-javatra nampiasain' ny olona (toy ny taolana, ny fitaovana vita amin' ny vatokaranana, sns) hita tao ishango ao amin'ny valan-javaboarim-pirenen'ny Virunga, izay mety teo anelanelan'ny 25 000 sy 20 000 taoa lasa tany.
Tany amin’ ny taonarivo faharoa dia nisy mpamboly banto, avy any amin' ny faritra eo anelanelan' ny tapany atsinanan' i Nizeria sy ny Grassfields any Kamerona, hatramin'ny 2600 tal. J.K., niditra tao amin’ io faritra io ka niorim-ponenana amin’ ny morontsiraka sy teny amin’ ny lembalemba atsinanana sy atsimo, ka teny izy ireo no nanao tavy sy nanangana fiarahamonina tarihin’ ny lehibem-poko.
Ny fitondran’ i KasavubuHanova
Ny nahafatesan’ i Patrice LumumbaHanova
Fitohizan’ ny fiokoan’ ireo mpomba an’ i LumumbaHanova
Ny fitondran’ i Mobutu Sese SekoHanova
Fanonganana an’ i Kasavubu sy fitondrana jadon’ i MobutuHanova
Taorian’ ny tsy fahombiazan’ ny governementa iraisana dia nandray ny fitondrana i Mobutu Sese Seko tamin’ ny faran’ ny taona 1965, rehefa avy nanongana an’ i Kasavubu, ka nanambara ny tenany ho filohan’ ny Repoblika. Tamin’ ny taona 1966 dia nanangana governemanta jadona, izay ananan’ ny filoham-pirenena fahefana betsaka, izy sady antoko tokana no nekeny hisy, dia ny Mouvement populaire de la révolution (MPR). Izany fitondrana izany (sy ny safidy momba ny antoko tokana) dia nohamafisiny tamin’ ny fampadaniana lalàm-panorenana vaovao tamin’ ny taona 1967. Navadika ho orinasam-pirenena ireo orinasa vahiny mpitrandraka harena an-kibon’ ny tany.
Fiakaran’ i Félix Tshisekedi teo amin’ ny fitondranHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27ny_Repoblika_Demôkratikan%27i_Kôngô&oldid=997865"
Dernière modification le 10 Oktobra 2020, à 08:08
Voaova farany tamin'ny 10 Oktobra 2020 amin'ny 08:08 ity pejy ity.